Hagayya 17, 2016
Hadha ilmi jalaa ajjeefame, Gimbii, Oromiyaa
Adooleessa 6 bara 2016 Oromiyaa keessatti hiriirri mormii gaggeeffamuu isaa fi namoonni hedduun ajjefamuu fi hidhamuu, kanneen biroon eessa akka bu’an dhabamuu isaa jiraatonni dubbataa jiran. Gareeleen mirga dhala namaaf falman adda addaa fi kanneen biroon ajjechaa fi hidhaa dhaqqabe irratti ibsa baasaa jiran .
Ogeessa Faarmaasii Obbo Gabayyoo Jallataa
Godiina wallaggaa bahaa magaalaa Naqamtee keessatti namoonni 11 ajjefamuu Hospitaalli Naqamtee kan mirkaneessee ture yoo ta’u Wiixata darbe immoo kanneen wal’ansa argataa turan keessaa tokko, ogeessi Faarmaasii Obbo Gabayyoo Jallataa du’an boqochuu isaanii jiraattonni dubbatani jiru.
Gama kaaniin godina Wallaggaa Lixaa, magaalaa Gimbii keessatti, Obbo Musxafaa Mohammadnur Umar humnoota Federaalaan ajjeefamuu harmeen isaa Aaddee Aliimaa Mohammad Raadiyoo sagalee Amerikaaf ibsanii jiru. Angawoonni poolisiis deebii kennan qabu. Armaa gadiitti caqasaa.
Seerri Farra-shororkeessumaa Itiyoophiyaa Dhugumatti Ka Briteen Irraa Gargalfamee?
Tokkummaan Mootummootaa akka qaamii sadarkaa addunyaa nama hiriira mormii Oromiyaa fi naannoo Amaaraa dhiyoo irratti fixan qoratu gaafate